Nagu saabsan - Mingsanfeng Cap Mold Co., Ltd.
Shirkaddu waxay qaadatay hab maamul casri ah, oo leh qiime wax soo saar sanadle ah oo gaaraya 35 milyan .Haddaba, waxaan u heellannahay inaan noqonno "Hal Bixiye Bixiye Adeeg" ah oo loogu talagalay adeegga iyo badeecadda oo u dhaxeysa naqshadeynta caaryada, wax soo saarka caaryada, soo saaridda cirbadeynta, isku imaatinka iyo kadib iibinta.
Mingsanfeng Cap Mold Co., Ltd oo la aasaasay Juunyo 1999, shirkaddu waxay ku takhasustay horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga cirbadaha caagga ah. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo foorari ah, cajalado dusha sare leh, daboollo furka, koofiyadaha injineerka amniga-saliida, maydha daboolida dareeraha, maydhada weelka la isku qurxiyo iyo daboolka iwm. iwm
Warshaddu waxay kaloo leedahay aqoon isweydaarsi caaryada ah, oo khibrad hodan ah u leh R & D iyo soo saarista caaryada daboolka caagga ah, waxayna u habeyn kartaa dhammaan noocyada dhalada dhalada. Shirkaddu waxay leedahay ku dhowaad 60 shaqaale, oo ay ku jiraan ilaa 10 injineero, 20 injineerro sare oo caaryada ah iyo 30 farsamo yaqaanno sare ah. Shirkaddu waxay qaadatay hab maamul casri ah, oo sanadkii lagu soo saaro 35 milyan.
Shirkaddu waxay leedahay qalab wax soo saar oo horumarsan iyo qalab isku urursan oo otomaatig ah oo leh aqoon isweydaarsiga cirbadeynta GMP. Wadarta 20 nooc 100-350T mashiinada duritaanka la soo dhoofiyay waxaa ka mid ah Japan Toshiba, JSW, Germany Demag. Waxay leedahay caaryado ah nooc dhakhso leh oo kuleyliyaha iyo caaryada kuleylka kuleylka kulul ee leh Qaab Xidhitaanka (IMC). Waxaan qaadi karnaa dhammaan noocyada dhibaatada, wasakhda-saxnaanta sare iyo alaabada cirbadeynta gaarka ah ee macaamiisha heerka-sare ee caalamiga ah. Ku takhasusay naqshadaynta iyo farsamaynta wax soo saarka alaabada dhalada dhalada ee kala duwan. Cilmi-baarista iyo horumarinta qalabka caaryada waa Yasda, Okuma, OKK, Hatting iyo Japan Longze. Qalabka baaritaanka waxaa ka mid ah Zeiss Saddex-geesood ah iyo Labo-cabbir. Wixii hadda ka dambeeya, waxaan u heellan nahay inaan noqonno "Hal Bixiye Bixiye Adeeg" ah oo loogu talagalay adeegga iyo wax soo saarka oo u dhexeeya naqshadeynta caaryada, soo saaridda caaryada, soo saaridda cirbadeynta, isku imaatinka iyo iibka kadib.